Laptọọpụ nwere i5 processor: ndị nwere uru kacha mma maka ego
Ọtụtụ afọ gara aga, kọmputa kacha ewu ewu bụ kọmpụta ụlọ elu. Ha bụ ndị nwere ya niile, ndị kachasị ike ma bụrụkwa ndị dị ọnụ ala, ma, dị ka ọ dị na ihe niile, ka oge na-aga, laptọọpụ dara ọnụ ahịa mgbe ike ha na-abawanye. N'ihi nke a, ọtụtụ n'ime anyị anaghịzi achọ kọmputa "obere" ma anyị họrọ nke anyị nwere ike ịkwaga ma jiri ebe ọ bụla. Onwe ya, mgbe ọ bụla ha jụrụ m nke m ga-ahọrọ, ana m akwado a i5 laptọọpụ, ya bụ, onye nhazi ya na-eji Intel i5 ma ọ bụ ihe dakọtara.
1 Laptọọpụ i5 kacha mma
2 Ụdị laptọọpụ i5 kacha mma
3 Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ i5?
4 I5 ma ọ bụ i7?
5 O doro m anya na achọrọ m laptọọpụ i5, yana 8GB ma ọ bụ 16GB nke RAM?
6 draịvụ ike nkịtị ma ọ bụ SSD?
7 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ i5 dị ọnụ ala
8 Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ i5 dị ọnụ ala?
Laptọọpụ i5 kacha mma
Sọpụrụ MagicBook X14 -...
Ụdị laptọọpụ i5 kacha mma
Ọ bụrụ na nhọpụta gara aga ị hụbeghị ụdị laptop i5 nke masịrị gị, n'okpuru ị ga-ahụ ndị kachasị mma dịka ika ahụ si dị:
Lenovo bụ nnukwu nhọrọ mgbe anyị chọrọ ịzụrụ kọmpụta ọ bụla, nke a bụkwa n'ihi na ọ na-arụpụta ma na-erekwa kọmpụta dị iche iche, nke gụnyere ike na akọ karịa. Ụlọ ọrụ ahụ sitere na China, anyị niile makwaara ihe nke a pụtara: na-emekarị, Uru ya maka ego dị mma, na anyị anaghị ekwu maka akara China nke ọnụahịa ya dị ntakịrị, ma àgwà ya fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị adị.
N'ime katalọgụ ya, anyị na-ahụ laptọọpụ nwere i5 processor nke nwere ike iji akụkụ dị iche iche soro ya, dịka draịva ike buru ibu ma ọ bụ dị nta, draịva siri ike ma ọ bụ SSD, Ihuenyo nke nha dị iche iche na otu ihe ahụ nwere ike ikwu maka RAM, ma, ihe ọ bụla anyị na-ahọrọ, i5 gị bụ nzọ dị mma.
HP bụ ụlọ ọrụ North America nke na-akwado ya ihe karịrị afọ 80. N'oge a niile, ha arụpụtara ma ree ngwaike nke ụdị niile, n'agbanyeghị akụkụ nke ewu ewu ha bụ n'ihi ndị na-ebi akwụkwọ ha. Afọ iri asatọ bụ oge zuru oke iji mụta ka esi eme, ma mee ya nke ọma, kọmpụta dị iche iche, n'ime ha bụ ụfọdụ laptọọpụ i5 nke na-enweta nyocha dị mma site na obodo ndị ọrụ.
Laptọọpụ HP 15S-FQ2029NS...
Achọpụtara m na ọ na-achọsi ike ma dị ịrịba ama na HP nwere oge ka njọ, ihe karịrị afọ iri gara aga, eleghị anya n'ihi na ha chọrọ ịmepụta (dịka ọmụmaatụ, na imewe) ma ọ pụtaghị nke ọma. Site na nkuzi ahụ nke ọma, ụlọ ọrụ ahụ laghachiri na mgbọrọgwụ ya na ihe malitere na aha Hewlett-Packard ọzọ na-enye otu n'ime nhọrọ kacha mma na ahịa.
ASUS bụ ụlọ ọrụ Taiwanese lekwasịrị anya na ya imepụta na ire ngwaike maka kọmputa na ekwentị. Ha bụ nhọrọ dị mma maka uru ha bara maka ego na, ọ bụ ezie na agaghị m ekwu ya, otu n'ime ụdị ọkacha mmasị nke onye edemede nke isiokwu a.
Su katalọgụ dị ukwuu, ma ọ dị nnọọ mfe ịchọta i5 laptọọpụ, ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ, na-arụ ọrụ nke ọma, na-enweghị iji ego. Na mgbakwunye na kọmpụta ndị a dị n'etiti, ọ na-enyekwa ndị dị ike karịa, na ọtụtụ n'ime ha nwere ezigbo mma.
Huawei abụrụla n'ime afọ iri gara aga otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị mkpa n'ụwa, na akụkụ ekele ya telephony ngalaba. E hiwere ya na ngwụcha '80s, mana "ọganihu" emetụtala ya n'oge na-adịbeghị anya. Ekwentị ndị dị mma sochiri mbadamba nkume, ngwaọrụ ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi yana kwa kọmputa, gụnyere i5 laptọọpụ.
Dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile Chinese, ha na-enye ezigbo uru maka egoMana Huawei abụghị akara "Chinese" n'echiche ọjọọ nke okwu ahụ. Ihe ọ na-emepụta ma na-ere bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya, ya mere ọ na-emezu ihe dị mma, mara mma na ọnụ ala.
Dị ka ASUS, Acer bụ ụlọ ọrụ Taiwanese, mana ọ na-ekpuchi ọtụtụ ihe, n'ime nke anyị nwere sava, ngwaọrụ nchekwa, eziokwu mebere, peripherals na ndị ọzọ. Dịkwa ka ASUS, ọ bụ otu n'ime ụdị ọkacha mmasị nke onye edemede nke isiokwu a, ebe ọ bụ na ha na-emepụta ụdị kọmputa dị iche iche, ma ndị dị n'etiti dị nnọọ mma na ọnụahịa ha karịrị asọmpi.
- Laptọọpụ Acer EX215-52
A ga-achọpụta ọnụahịa dị mma karịsịa na laptọọpụ nwere i5 processor, ma ọ bụ ụdị ọ bụla nke dị n'etiti. Na ọnụ ọgụgụ nke ụdị enyere site na katalọgụ ya, ọ dịịrị anyị mfe ịchọta laptọọpụ zuru oke maka anyị, onye nwere obi ụtọ nke otu n'ime ha na-agwa gị na o nweelarị ọzọ ma nyekwa ya nsonaazụ dị mma.
Dell bụ teknụzụ teknụzụ dị iche iche nke Texas na-abụghị naanị na-arụpụta ma na-ere ngwaọrụ ndị metụtara kọmputa, ma na-arụkwakwa ma na-enye nkwado maka ụdị ngwá ọrụ a. Ọ tọrọ ntọala na 80s, na ebe ọ bụ na mgbe ahụ ọ nwetawo ụfọdụ mkpa na ụwa nke kọmputa. N'ime katalọgụ ya, anyị na-ahụ ihe niile, dị ka laptọọpụ nwere i5 processor nke nwere ike iso ya na ihe ndị ka mma ma ọ bụ ndị nwere uche karịa ka ọ dabara n'akpa ọ bụla.
Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ i5?
N'ebe a, achọrọ m ịnye echiche nke onwe m yana nke nwere ebumnobi karịa. Na, n'onwe ya, mgbe ha na-ajụ m ihe processor a laptọọpụ kwesịrị inwe opekempe, m na-ekwu i5, na m na-ekwu na-enweghị ịjụ ihe ha ga-eji ya. Gịnị kpatara? Ọfọn, n'ihi na m nwere i3 na, gbaghara okwu ahụ, na Windows 10 ọ na-akpụ akpụ; Ọ dị ngwa ngwa na imeghe ụfọdụ ngwa nwere ike were nkeji, nke bụ ebighi ebi. Ya mere, echere m onye ọ bụla chọrọ laptọọpụ na-adịghị ata ahụhụ site na ụjọ ahụ ga-azụta i5 ... ma ọ bụ karịa, dị ka anyị na-akọwa n'okpuru.
Ma ihe dị mkpa n'oge a bụ ikwu okwu ntakịrị banyere arụmọrụ nke i5, na-enyeghị nọmba ma ọ bụ kwuo ihe ọ bụla metụtara Benchmarks. Laptọọpụ nwere i5 ọ ga-eme ka anyị na-arụ ọrụ nke ọma, na nke a ka m gosiputara atụnyere arụmọrụ nke i3 m na i5, ma Windows. I5 na-agbachitere onwe ya, yabụ anyị nwere ike mepee ngwa ndị a na-ahụkarị na ezigbo ọsọ ma rụọ ọrụ nkịtị na mgbaze.
Ọ bụ ezie na a ghaghị iburu n'uche nke ahụ processor abụghị ihe niile, na nke ahụ bụ ihe anyị ga-enyochakwa n'ihe ndị a.
I5 ma ọ bụ i7?
i7, n'ezie. Ma ọ bụ na o doro anya. N'ikwu okwu banyere ndị nhazi, ka ike dịkwuo mma, mana enwere ihe anyị kwesịrị iburu n'uche: mwụli elu site na i5 gaa na i7 nwekwara ike ịpụta a. ịrịba price ima elu. Na mgbakwunye, na kọmputa na-ebuli i7 nwekwara ike ịpụta na ọ na-agụnye ihe ndị ọzọ dị elu, ya mere mmụba ọnụahịa ga-abụ n'ihi ịgbakwunye ọnụ ahịa nke ihe nrụpụta dị ike na ihe ndị ọzọ.
M ga-akọwara enyi ya otu a: Ị dabere na ọsọ? Ị ga-arụ ọrụ ma chọọ arụmọrụ? Ị nwere ike imeli ya? Ọ bụrụ na ojiji anyị ga-eji laptọọpụ anyị dị n'ọkwa onye ọrụ ma ọ bụ na anyị ga-eji ngwa na mmemme na-adịghị achọ, mgbe ahụ i5 ka mma, n'ihi na maka ọnụ ala dị ala, anyị ga-eme otu ihe ahụ. na anyị ga-eme na i7, ma na obere ọsọ nke pụtakwara ọnụ ala.
O doro m anya na achọrọ m laptọọpụ i5, yana 8GB ma ọ bụ 16GB nke RAM?
Ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị bụ kedu ihe anyị ga-eji na laptọọpụ anyị, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị ga-emepe ọtụtụ ma ọ bụ ole na ole usoro, ma ọ bụ ọ bụrụ na ngwa ndị anyị ga-eji chọrọ RAM ma ọ bụ karịa. Akwụkwọ ndetu nwere i7 na 8GB nke RAM ga-eme nke ọma n'akụkụ niile, ọ gwụla ma ị na-arụ ọrụ dị oke arọ, dịka ndezi vidiyo na ọdịyo kacha achọ.
M na-ekwu na n'elu n'ihi na 16GB nke RAM adịghị adịkarị mkpa, na n'onwe m achọpụtara na i5 + 16GB nke RAM bụ ihe na-adịghị mma. Agaghị m agọnahụ na ọ dị mma ịnwe ọtụtụ RAM, mana ọ bụrụ na anyị ahọrọ i5 ọ nwere ike ịbụ n'ihi na anyị achọghị ike dị ukwuu, yabụ na ọ baghị uru itinye ego karịa ka ọ dị mkpa.
Agbanyeghị, dị ka m kọwara, ihe niile ọ dabere na usoro nke anyị kwesịrị imeghe. Ọ bụrụ na a ga-enwe ọtụtụ, ọ bụ ezie na m ga-akwado iso ha na i7, mgbe ahụ anyị nwere ike ịhọrọ nke nwere 16GB nke RAM.
draịvụ ike nkịtị ma ọ bụ SSD?
Isi ihe a bụ ntakịrị ihe déjà vu sitere na ngalaba i5 vs i7. Ihe nhazi dị ka ụbụrụ kọmputa: ka ọ dị mma, ngwa ngwa ọ na-eche (usoro). N’iburu n’uche na a na-agụ ma na-ede diski, olee akụkụ ahụ́ mmadụ ka a pụrụ iji tụnyere ha? Anya na aka na-abata n'uche. Diski diski "nkịtị" na-enye ọsọ ọsọ na-agụ na ide ihe, na ndị na-agbalịbeghị ihe ọ bụla ka mma amaghị ihe dị mma n'ezie. N'akụkụ aka nke ọzọ, draịva SSD na-enye oke ịgụ na ide ọsọ dị elu, maka ihe ha bara ezigbo uru, nke a na-egosikwa na ihe niile.
Mana, dị ka ọ dị na i7, draịva SSD Ọ dị ọnụ karịa, na ịzụrụ laptọọpụ na ụdị draịva ndị a nwere ike ịkpata otu n'ime ikpe ndị a: ọnụ ahịa na-arị elu nke ukwuu, ma ọ bụ nchekwa ahụ na-agbada iji kwụọ ụgwọ. Ya mere, ebe a ajụjụ bụ ọzọ ma anyị nwere ike imeli mmezi ego na ma anyị chọrọ ọsọ, nakwa ma anyị nwere ike na-arụ ọrụ na a nta disk. N'ihi na ọsọ na arụmọrụ nke SSD na-enye bụ nke a na-ahụ anya, mana otu ahụ ka ọnụ ahịa ahụ dịkwa. Ebe a bụ onye ọrụ ga-ekpebi ihe ị ga-ahọrọ.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ i5 dị ọnụ ala
Amazon bụ nhọrọ nke ga-adị na ndepụta ndị a mgbe niile. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 1994, na isi ihe kpatara ya bụ e-azụmahịa, ya bụ, online ahịa. N'oge na-adịbeghị anya, ha bịara ikpuchi ọtụtụ ahịa, n'ime nke anyị nwere ọrụ dị ka Amazon Prime Video, Amazon Music, wdg, ma ọ bụ ihe ọtụtụ ndị maara dịtụ ntakịrị, ọgụgụ isi (nke ha na-eji na ngwaọrụ ndị dị ka Alexa) na mgbakọ na mwepụ na. igwe ojii. N'ihe gbasara nke ikpeazụ, Amazon na-enye ndị ọzọ ọrụ ya ka ha nwee ike ịrụ ọrụ na ịntanetị, ya bụ, ọtụtụ ọrụ na-eji sava Amazon.
Amazon bụ, maka m na maka ọtụtụ, ụlọ ahịa ịntanetị kachasị mkpa n'ụwa. N'ime ya anyị nwere ike ịhụ ụdị ngwaahịa niile, ọ bụrụhaala na ndị a nwere ike izipu. N'ime ngwaahịa ndị a, anyị nwere ihe ọ bụla metụtara ngwa elektrọnik, dị ka ekwentị mkpanaaka, igwe onyonyo ma ọ bụ ụdị kọmputa niile, ebe anyị ga-ahụ kọmpụta i5 nke anyị na-eme ebe a. Na ihe kacha mma bụ na, dị ka nnukwu ụlọ ọrụ, ha nwere ike na-enye n'ezie asọmpi ahịa, nke na-agbakwunyere kacha mma nkwa.
El Corte Inglés, n'agbanyeghị na okwu ikpeazụ nwere ike na-eduhie eduhie, bụ otu nkesa zuru ụwa ọnụ dabere na Spain. Emebere ya nke ụlọ ọrụ nke ụdị dị iche iche, mana ọ bụrụ maka ihe ha na-ewu ewu bụ maka ụlọ ahịa ngalaba ha, ya bụ, maka nnukwu ụlọ ahịa ya bụ́ ndị anyị pụrụ ịhụ n’obodo ukwu ndị gbasakwara n’ọtụtụ ala ụlọ.
Ụlọikpe Bekee O nwekwara ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, na n'ime abụọ anyị nwere ike ịchọta ngwaahịa ejiji, otu n'ime isi ihe ya kachasị ike, na ngwá electronic, ebe anyị nwere ike ịzụta ekwentị mkpanaaka, mbadamba nkume, telivishọn, ngwá egwú na kọmputa, n'etiti ndị ọzọ. Na ngalaba mgbakọ, anyị ga-ahụ i5 laptọọpụ anyị na-ekwu maka ya n'isiokwu a, kamakwa ndị ọzọ nwere uche ma ọ bụ ndị ọzọ dị ike karị, gụnyere ndị e mere maka egwuregwu.
Ọtụtụ afọ gara aga, a maara hypermarkets ya dị ka Continente, ma ọ bụ naanị na nnukwu obodo ole na ole. N'ime afọ, ugbua n'okpuru aha Carrefour, ndị a na-echekwa na yinye nkesa mba ụwa nke French Ha dị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ mmadụ ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya, ọ dịghị ihe a na-atụ anya ya site na ihe a na-ewere dị ka ndị mbụ Europe na-enweta ego.
Na Carrefour anyị nwere ike ịhụ ụdị ngwaahịa dị iche iche, site na nri, uwe, ngwaahịa ịdị ọcha nkeonwe yana, nke kachasị, ngwa eletrọnịkị. Ọ bụ na ngalaba ikpeazụ a ebe anyị nwere ike ịhụ kọmpụta na, dị ka ihe niile ha na-enye, ha ga-adị na ya ezigbo uru maka ego.
Site na aha a, o kwesịghị iju gị anya na ọ dị na ndepụta a. Ngwa PC bụ a Portal e-azụmahịa Spanish nke e hiwere na 2005, mana nke bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na Spain na Portugal taa. Ha malitere ire ha kọmputa na ihe ndị ọzọ, n'ihi ya aha ha, ma ugbu a, anyị nwekwara ike ịchọta ihe ndị ọzọ, dị ka igwefoto.
Mgbe ụlọ ọrụ pụrụ iche na ihe, ọ na-emecha ghọọ ihe ntụaka maka otu ihe ahụ, nke a na-atụgharịkarịkwa n'ime ya na-ere ọtụtụ ihe ndị metụtara ya. Yabụ, akụrụngwa PC na-enye ọtụtụ ngwaahịa kọmputa, ọ na-eme ya na ọnụ ahịa kacha mma. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-atụle ịzụrụ i5, i7, egwuregwu ma ọ bụ laptọọpụ ọrụ, otu n'ime nhọrọ ndị ị ga-eburu n'uche bụ PC Ngwa.
E hiwere Mediamarkt na 1979, mana o ruru mba ndị dị ka Spain ihe dị ka afọ iri abụọ ka e mesịrị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, agbụ nke ụlọ ahịa bịara bụrụ onye ama ama maka inye ngwá electronic, ngwa na ngwaahịa kọmputa Ọnụahịa dị ala, na mgbe e mesịrị, ha ulo oru slogan "Abụghị m onye nzuzu" nke na-ezo aka na anyị ga-abụ smart ma ọ bụrụ na anyị zụrụ na ha na-echekwa, nanị n'ihi na anyị ga-enweta otu na a ala price.
Shoplọ ahịa ahụ si Jamanị, na n'ime ya anyị nwere ike ịhụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na-arụ ọrụ na ọkụ eletrik. Tinyere n'ime oghere ọkụ, kọmputa na-arụ ọrụ, ọbụna laptọọpụ, ọ dịkarịa ala iji kwụọ ha ụgwọ, ya mere, n'ebe ahụ, anyị ga-ahụ i5 laptọọpụ na ọnụahịa dị mma na nchekwa zuru oke.
Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ i5 dị ọnụ ala?
Black Friday bụ a ihe omume ire ere nke na-ewere ọnọdụ n'ụbọchị na-esote Ekele na United States. Nzube ya bụ ịkpọ anyị òkù ịzụ ahịa ekeresimesi mbụ, ma enweelarị ọtụtụ mba ebe a na-eme ememe ya, dị ka Spain. N'ezie, a na-eme ya n'ụwa niile, ma n'ụlọ ahịa anụ ahụ ma n'ịntanetị.
N'oge Black Friday anyị ga-ahụ mbelata ego na laptọọpụ ụdị ihe niile, na mbụ na-enweghị ọdịiche dị ka e kwesịrị ịdị na Cyber ​​​​Monday na anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. Ọ bụ ezie na ekwesịrị ịme ya naanị na Fraịde, ụfọdụ azụmaahịa na-eme ka oge a kwụsịtụ gbanwee iji tinye nko ahụ wee kpebie ịzụta ihe anyị nwere na listi ọchịchọ anyị.
Prime Day bụ ihe omume ire ere ọzọ, yiri Black Friday na Cyber ​​​​Monday, mana enwere otu ọdịiche dị mkpa: naanị ndị ọrụ Amazon Prime dị, ya bụ, ndị anyị debanyere aha. N'oge ihe omume ahụ, anyị ga-ahụ ego n'ụdị ngwaahịa ọ bụla, na mbelata ahụ nwere ike bụrụ ihe jọgburu onwe ya. E nwere ọbụna flash amụọ, nke bụ otu ihe nkwalite na obere nkeji na obere ọnụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na-atụle ịzụrụ laptọọpụ i5, ma ọ bụ nkọwa ọ bụla ọzọ, Amazon Prime Day ọ bụ oge kacha mma.
Dị ka Black Friday, Cyber ​​​​Monday bụ ihe omume ahịa na-eme na Mọnde na-esote Ekele na United States, Mọnde na-esote Black Friday. Ebumnobi ya bụkwa ịkpọ anyị òkù ịzụrụ ekeresimesi mbụ anyị, mana, Na tiori, ihe anyị ga-ahụ n'ụbọchị ahụ ga-abụ naanị ngwaahịa eletrọnịkị, n'ihi ya, Cyber.
Ọtụtụ ụlọ ahịa na-emebi iwu, ma maka ngwaahịa eletrọnịkị na ụbọchị, ma na-ejikọkarị ọdịiche dị n'etiti Black Friday na Cyber ​​​​Monday, nke pụtara na ịre ahịa dị na ngwụcha izu na Mọnde. Otu ọ dịla, ọ bụ ụbọchị na-enye nnukwu mbelata na laptọọpụ, ya mere ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ihe metụtara ngwá electronic, dị ka i5 laptọọpụ.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nhazi » I5 laptọọpụ